at 192-168-1-1 IP Address Info, kwi http://192-168-1-1l.com, njengeprayorithi yethu engundoqo iimfihlo iindwendwe zethu. Olu xwebhu yemfihlo iqulethe iintlobo ulwazi ziqokelelwe zishicilelwe 192-168-1-1 Idilesi IP Info kwaye sisebenzisa ngayo.
Ukuba unayo eminye imibuzo okanye ufuna ingcaciso engaphezulu malunga yemfihlo yethu, musa ukuthandabuza qhagamshelana nathi nge email ku jaypol929@gmail.com
192-168-1-1 Idilesi IP Info kulandela inkqubo eqhelekileyo yokusebenzisa iifayile log. Ezi fayile log iindwendwe xa undwendwela iwebhu sayithi. Zonke iinkampani ibamba ukwenza oku kunye nenxalenye yeenkonzo ine’ analytics. Ingcaciso eqokelelwe iifayile log zibandakanya intanethi protocol (IP) iidilesi, uhlobo browser, Umniki-sevisi ye-intanethi (ISP), Umhla kunye nexesha nesitampu, wayebhekisela / amakhasi yokuphuma, yaye mhlawumbi inani konqakrazo. Ezi ezinganxulumananga ukuba naluphi na ulwazi olwazekayo. Injongo yale nkcazelo ukuba trends ukuhlaziya, ekuphatheni isayithi, yokulandela abasebenzisi’ intshukumo kwi website, kwaye ulwazi demographic.
Njengayo nayiphi na iwebhusayithi, 192-168-1-1 Idilesi IP Info usebenzisa 'cookies'. Ezi cookies zisetyenziswa ukugcina ulwazi kuquka iindwendwe’ ozikhethayo, kwaye amaphepha kwi-website ukuba ndwendwe zinokufumaneka okanye batyelela. Le nkcazelo isetyenziselwa nokwandisa abasebenzisi’ amava ukuqhelanisa isiqulatho lethu iphepha esekelwe kwiwebhu kwiindwendwe’ uhlobo lwebrawuza kunye / okanye olunye ulwazi.
Google kabili DART Cookie
Qaphela oko 192-168-1-1 Idilesi IP Info akukho ukufikelela okanye ukulawula ezi cookies ezisetyenziswa yi wesithathu abathengisi.
Okwesithathu Imigaqo Pary Privacy
192-168-1-1 Yemfihlo IP Idilesi Info akuthethi isicelo kwezinye abathengisi okanye websites. Ngaloo ndlela, siya Nicebisa ukuba bafunde iingxelo nkqubo Privacy ezichaphazelekayo ezi iiseva wesithathu intengiso ukuze ufumane ulwazi oluthe vetshe. Mhlawumbi ziquka izenzo zabo kunye nemiyalelo ukuphuma njani iinketho ezithile. Ungafumana uluhlu olupheleleyo lwezi nkqubo Privacy kunye nonxibelelwano lwazo apha: Yemfihlo Links.
Ungakhetha ukukhubaza cookies ngokusebenzisa kwakho iinketho browser. Ukuze ukwazi ulwazi oluthe vetshe malunga ulawulo cookie kunye bencwadi be web ethile, ingafunyanwa kwi iibrawuza’ websites abakuwo. Ziziphi Cookies?
Enye inxalenye ephambili yethu undongezelele ekukhuseleni abantwana ngoxa usebenzisa le internet. Sikhuthaza abazali kunye nabagcini babantwana ukuba bagcine, inxaxheba, kunye / okanye esweni nokukhokela umsebenzi wabo online.
192-168-1-1 IP Idilesi Info a azinako ukuqokelela Personal ababonakala Information abantwana abangaphantsi kweminyaka 13. Ukuba ucinga ukuba umntwana wakho ukuba olu hlobo lolwazi kwi website yethu, siyakukhuthaza ngamandla ukuba uqhagamshelane nathi ngoko nangoko yaye siza kwenza iinzame zethu okusemandleni ukususa ngokukhawuleza ulwazi kwiirekhodi zethu.
Yemfihlo Online kuphela
Le nkqubo Yokuphepha isebenza kuphela imisebenzi yethu online kwaye isemthethweni neendwendwe website yethu malunga ulwazi babelana kunye / okanye ukuqokelela ku 192-168-1-1 IP Address Info. Lo mgaqo-nkqubo ingasebenzi kuzo naziphi na iinkcukacha eziqokelelweyo intanethi okanye nge amajelo ngaphandle kule website.
Ngokusebenzisa website yethu, ngokoke wena uyavuma yemfihlo yethu kwaye uyavuma ukuba njengaMagunya nemibandela.